Sharciga iyo Qawaaniintu waxay ka samaysmaan dhacdooyinka waayaha waxaa qoray Prof Omar Osman Hersi Xiis
Wednesday May 20, 2020 - 09:46:49 in Slider by
Sharciga iyo Qawaaniintu waxay ka samaysmaan dhacdooyinka waayaha waxaa qoray Prof Omar Osman Hersi Xiis WAX KA BARO COVID-19,
W/Q Prof Omar Osman Hersi Xiis
Waxa maalmahan magaalada Burco isa soo taraya tallaabooyinkii lagu yiqiin ilbaxnimada. Bulsho waxay ilbax tahay marka ay sharciga.iyo qawaaniinta ehel ka dhigto. Sharciga.iyo qawaaniintuna waxay ka samaysmaan dhacdooyinka waayaha. Waxaynu maqlayney tabashooyinka dadweynaha ee adeegyada laydhka, biyaha iyo duruufaha la soo dersey macallimiinta.
Arrimahan oo intoodii dhammaatay lagu qanacsan yahay sidii la isula meel dhigay, inta hadhayna waxa la rajeynayaa in si wanaagsan loo soo afjaro. Hadiyo jeer marka ay tabashooyin yimaaddaan laguma kala adkaado buuq, dhagax tuur iyo nabadgelyada oo wax loo dhimo, waxa lagu kala adkaadaa hanashada taageerada dadweynaha (public support).
Sidaa-awgeed, waa lagama maarmaan dhaqdhaqaayada noocan oo kale ah inay hoggaanka u qabtaan aqoonyahanno xil kas ahi, waana hab dhaqan togan oo loo baahan yahay inay bulshadu qabatinto. War murtiyeedkii macallimiinta gobolka Togdheer waxa ka muuqatey aqoonyahannimo, aftahannimo iyo xarrago hadal aany hoos ugu daadegin tabashadoodii. Kolley anigu waan ku diirsaday. Haddaba, waxan kula talin lahaa macallimiinta in aanay lumin fursadda maanta isu keentay ee midaysay. Waxa habboon inay samaystaan urur u dooda sida "Ururka Macallimiinta Togdheer” kaas oo u gudbi kara gobollada dalka oo dhan oo noqon kara "Ururka Macallimiinta Somaliland” (Somaliland National Teachers Union).
Urukaas oo u adeegi doona danaha macallimiinta xubno ka noqda. Waa dariiqo ka mid ah kuwa lagaga gudbi karo keli doonashada, qabyaaladda iyo hamrashada wax aad xaq u leedahay. Waxa kuu doodaya Urur sharci ah oo aqoontii, sharcigii iyo dhaqaalihii uu kuugu shaqayn lahaaba aad ka heshiiseen. Ku naso qaddar aan badnayn oo qaadhaanka xubinnimada ururka ah (membership fee). Why do you need reer Hebel, when $5 can work for you? W/Q
Prof Omar Osman Hersi Xiis